Boeing 777 tra-doza:Karohina hatraty Madagasikara -
AccueilSosialyBoeing 777 tra-doza:Karohina hatraty Madagasikara
Boeing 777 tra-doza:Karohina hatraty Madagasikara
06/12/2016 admintriatra Sosialy 0
Arivo andro lasa izao no tsy hita popoka ilay Boeing 777 nitondra sidina MH 370, an’ny kaompaniam-pitaterana an ’habakabaka Malaysia Airlines. Firenena maro no efa nanaovana fikarohana ireo potiny hitadiavana ny taolambalon’ireo niharam-boina saingy mbola tsy nisy nahitam-bokany izany. Efa nisy kosa ireo potipotik’ity fiaramanidina ity hita tamina toerana maro samihafa toa ny tany La reunion, Mozambika, Maurice, Tanzanie, efa nahitana soritra tamin’ny fikarohana ihany koa teto Madagasikara; tany amin’ny ilany atsinanana iny toy ny tany Toamasina, tany amin’ny Nosy Sainte Marie ary tany Nosy Be. Noho izany dia tonga eto Madagasikara ny solontenan’ireo fianakavian’ireo niharam-boina hatramin’ny faha-3 ny volana Desambra teo hanohy ny fikarohana. Ankoatra ny fitadiavana ataon’izy ireo dia miantso ny fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy izy ireo amin’ny fikarohana izay ataony. Ny fampandrenesa haingana ny tompon’andraiki-panjakana raha sendra mahita tranga na sori-baovao azo ampitaina no hanentanana ny vahoaka eto an-toerana, indrindra ireo mipetraka manamorina ranomasina na mpampiasa ranomasina. Mialohan’izay dia raisina an-tsoratra ny daty sy ny ora nahitana ireo singa mifandraika amin’ilay fiaramanidina ary alaina sary izany avy eo. Tsy tokony ho sasana na kasihana ilay singa aorian’izay fa fonosona ary apetraka amin’ny toerana azo antoka mialohan’ny hatongavana amin’ny solontenam-panjakana akaiky.
Mampanano sarotra ny fikarohana ny fahalaviran’ireo tany rehetra nahitana ny potik’ity fiaramanidina ity, azo antoka hoy ny mpikaroka dia taty amin’ny faritry ny ranomasimbe indianina ary taty amin’ny ilany atsinanan’ny Afrika no niseho ny loza. Miainga avy amin’ny fihetsiky ny ranomasina no ahafahana manao ny fikarohana ny ambiny satria mety tsy nijanona tamin’ny toerana iray fa niovaova araka ny fitsokan’ny rivotra. Hatramin’ny faha-11 ny volana Desambra izao no andeha ny fikarohana iarahana amin’ireo manam-pahaizana teratany Espanola sy ireo fianakavian’ireo niharam-boina mikambana ao anatin’ny Voice 370. Raha tsiahivina dia mpandeha miisa 239 no nanjavona nandritra ny fanjavoan’ilay Boeing 777 izay niainga tany amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tany Malaisie ny faha-8 ny volana Martsa 2014. Teratany sinoa no maro an’isa tamin’ireo niharam-boina izay nahatra 135, tao ihany koa ny Frantsay sy Malaisianina.
Hala-bato ranofotsiny. Izay no tsikaritra amin’ny fanangonana sy famoaham-bokatra ataon’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidinana na ny Ceni tamin’iny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, ny 19 desambra teo, iny. Tsy misy izay vokatra tonga ...Tohiny